Esi nyefee niile WhatsApp chats na Telegram | Gam akporosis
Etu esi ebufe nkata WhatsApp na Telegram: ihe ohuru nke ngwa Durov
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Noticias, Gam akporo Ndị aghụghọ
Mara ma n'oge kacha mma, ugbu a Telegram na - enye gị ohere ịgafe nkata WhatsApp niile ngwa na o siri ike ọ bụla ọgbaghara. Smart n'ihi na Telegram na mgbaàmà na-eji uru nke ejighị n'aka nke WhatsApp n'onwe ya mepụtara n'ọnwa a; akpa maka ikike ọhụrụ a na nke abụọ maka iweta atụmatụ nke ngwa ngwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
N'ezie, Telegram ewerela blog ya iji kwusaa ozi ọma a ka ọ bụrụ na ịchọrọ ịga Telegram, ọbụlagodi mkparịta ụka niile, ị ga - eme ya n'ụzọ kachasị dị mfe ma kachasị mma. Ma ọ bụghị naanị site na WhatsApp, mana ị nwere ike ime ya site na Nweta ma ọ bụ ọbụlagodi Kakao Talk.
1 Etu esi ebufe mkparịta ụka WhatsApp na Telegram (na ndị ọzọ)
2 Chats na Telegram
3 Ozi ndị ọzọ sitere na Telegram
Etu esi ebufe mkparịta ụka WhatsApp na Telegram (na ndị ọzọ)
Nke a ọhụrụ Telegram ike na-arụ ọrụ maka ma nkeonwe na otu chats Ee ee, anyị ga - ahọrọ nkata nkata, nke ga - abụ otu kọntaktị anyị nwere na WhatsApp. Gaa maka ya:
Meghee WhatsApp na gaa na mkparịta ụka ma ọ bụ nkata
Site na bọtịnụ ntụpọ atọ kwụ ọtọ ị ga-ahụ nhọrọ «ọzọ»
Ugbu a anyị nwere pịa «Mbupụ»
Ọ na-enye anyị ohere ịhọrọ n'etiti etinyeghị faịlụ (nke ga-abụ onyonyo, ederede olu na ndị ọzọ) ma ọ bụ tinye ha
Site na nchịkọta nhọrọ gam akporo anyị ga-ahọrọ Telegram
Anyị ga-enwe n'ihu anyị ndepụta zuru ezu nke chats
Anyị na-ahọrọ nkata ma a ga-ebupụ ya ọdịnaya niile
Kwuo na chats ga-imported na ha ugbu a ụbọchị, na ihe omuma n’onwe ya ubochi ya nke mere ka ogha aghara.
Ugbu a, anyị nwere nkata ahụ si na WhatsApp gaa Telegram, yabụ anyị ga-eme onye ọ bụla masịrị anyị. A ụzọ dị ukwuu iji malite n'ụzọ kachasị mma na Telegram ma si otú ahụ nwee ahụmahụ yiri nke ahụ; dị ka nke anyị kọwara n’izu gara aga n’akwụkwọ ọzọ.
Chats na Telegram
Na-egosi ka esi akparịta ụka WhatsApp na Telegram, anyị na-echetara gị na n'adịghị ka WhatsApp, Telegram anaghị echekwa data ozi na ngwaọrụ, ya mere, ọ naghị erepịa ihe nchekwa ma si otú a anyị agaghị ehicha ya kwa mgbe; gwa ndi okenye ndị na-eme mkpesa na ọ dịghị ozi ọzọ na-abanye na ha n'ihi njedebe nke ohere ha.
Ma n'ezie na ọhụrụ a Telegram melite awade ọzọ akara nzuzo chats, otu dị iche iche nke onye ọrụ na akụkọ ihe mere eme nke oku iji nwee ike iwepụ. Ebe ọ bụ na ngwa nke Durov nwere anaghị emesi ojiji nke data na nzuzo, otu okwu dị mkpa karịa taa dị mkpa mgbe mgbaàmà na-enwetakwa ọtụtụ ndị ọrụ na obere oge; n'eziokwu ị nwere ike ịma nke ọdịiche kachasị mkpa nke abụọ ahụ mgbe a bịara n'ihe nzuzo.
Ozi ndị ọzọ sitere na Telegram
Enweela ya ijikwa olu na mkparịta ụka olu iji nwee ike ịbawanye ma welie olu nke ọ bụla, ọbụnakwa ndị nchịkwa ga-enwe ike ịchịkwa ya ka e si tinye ya na ndabara.
Kwuokwa mmụba nke ihe ọkpụkpọ ahụ iji nwee ike hazie ahụmịhe ahụ ma yabụ mgbe anyị na-egwu egwu, anyị nwere ike ịgakwuru obere ọkpụkpọ ahụ iji gaa n'ihu ma ọ bụ azụ. E tinyela nkọwa ndị ọzọ dị ka ekele ekele mgbe anyị malitere mkparịta ụka na nke mbụ, ma ọ bụ usoro ihe nkiri ọhụrụ iji bulie ahụmịhe onye ọrụ na gam akporo; mgbe ibudata faịlụ, ịkpọ egwu ma ọ bụ bulite nkata.
N'ikpeazụ mmelite nnweta metụtara TalkBack na VoiceOver, yana ikike ịkọ ọwa na adịgboroja adịgboroja. Ihe na-akpali melite nke na-enye ohere ka akparịta ụka WhatsApp niile na Telegram, dị ka ngwa ndị ọzọ dị ka Kakao Talk.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi ebufe nkata WhatsApp na Telegram: ihe ohuru nke ngwa Durov
Samsung Galaxy M21 na Galaxy F41 na-enweta mmelite nke Otu UI Core 3.0 na gam akporo 11
MarinDeck bụ onye ahịa Twitter siri ike akọwapụtara nke na-enye ahụmịhe TweetDeck